Wonke umuntu oye wezwa ukuthi umfana lowo safike emathinini ngoba wayekhona match.com ngesikhathi umsebenzi. Akufanele kube kwi dating yakho website uma besemsebenzini. It anganikeza umuzwa wokuthi abanandaba ngokuba khona, noma ukuthi ungafuni ukuba Nanka amanye amacebiso kuyokusiza ugcine ekhaleni lakho lihlanzekile futhi ngingangeni ezinkingeni uma kunothile othandana naye inthanethi futhi ufuna ukuba namanje akwazi ukwenza kahle emsebenzini.
Wena yokusilela emsebenzini wakho
Ukuze uqale, uyohlale ufuna isikhathi. Esinye isizathu ungase get ixoshe for ukuphola online asisho ngisho ukwenzani nawe zokuba internet emsebenzini ngibheka ibhokisi lakho lokungenayo. Uma ufuna ukuba ngingangeni ezinkingeni, hlola imiyalezo yakho emini yakho break noma uma ufika ekhaya. Ungabi sekwephuzile emsebenzini.
Boss Your ucabanga ukuchitha isikhathi sakho ku-internet
Enye into engase bagcina ukuthola wena adubula for ukuphola online ibheka dating yakho website lemeyili emsebenzini. Wena khona ukusebenza, hhayi ukuba ngibheka ukuphila kwakho social. Ihlola ibhokisi lakho lokungenayo kubalulekile, kodwa uyofuna ukukwenza uma wena break noma esinye isikhathi ukuthi akudingeki ukuba basebenze. Otherwise, boss yakho wayengase acabange ukuthi uchitha isikhathi on the internet, futhi uyogcina kokudubula wena babaqashela nomuntu “ayikho internet sonke isikhathi.”
You bheka sengathi akufihlayo
Kufanele futhi siqaphele ukuthi ukuziphatha kwakho ibonwa njalo. Uma wenza exakile uzama ukufihla okuthile emsebenzini, boss yakho ngeke ngokushesha usola okuthile, bese ugcine iso closer kuwe. Omunye simple slip-up and BAM, ubhekene gone.
Awuyena nezimo ngokwanele
Ukuba nezimo esinye ingxenye ebalulekile ukuphola online nokuba ukuphila ibhizinisi eliphumelelayo. Ungase ube kabusha sihlele isimiso sakho kancane, kodwa uma boss wakho udinga ngempela kwenziwa into, ukwenza isikhathi sokuba naye.
Awudingi ukugxila emsebenzini wakho
Kufanele futhi unake umzamo wena ekutheni. Uma ucabanga ngalokho niyogqokani ngalolo suku hot une tonight, wena ngeke agxile emsebenzini wakho, hhayi ekutheni eligcwele yakho.
You badmouth umqashi wakho online
Futhi, kufanele ungalokothi badmouth inkampani, ngisho usuku lwakho online. Uma inkampani yakho wathola ngalokhu, kungaholela ekutheni axoshwe emsebenzini wakho yakho, futhi akekho ofuna ukuthi. Gcina yonke imibono electronic mayelana positive yakho emsebenzini.
You hlanganise uhlobo olungafanele abantu
Okokugcina, kufanele nje ngokuvamile zama ngingangeni ezinkingeni. Ukuzihlanganisa uhlobo olungafanele abantu kungaholela kuwe ukubanjwa ixoshe. Ngemva kwalezi amathiphu kuyokwenza umuntu aphumelele kokubili ukuphila kwakho romantic and professional.